मन्त्री बिना मगरले २५ करोड कमिसनको बार्गेनिङ गरेको हल्ला कि वास्तविकता ? | Samajik Khabar
Home मुख्य मन्त्री बिना मगरले २५ करोड कमिसनको बार्गेनिङ गरेको हल्ला कि वास्तविकता ?
मन्त्री बिना मगरले २५ करोड कमिसनको बार्गेनिङ गरेको हल्ला कि वास्तविकता ?
काठमाडौं : केपी ओली नेतृत्व सरकारका एक मन्त्रीले २५ करोड बार्गेनिङ गरेको विषय अहिले निकै चर्चामा छ । खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री बिना मगरले घुस मागेको भन्दै तत्कालीन सचिव गजेन्द्र ठाकुरले पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी गराएका थिए । त्यसपछि उनलाई अर्कै मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको थियो ।
Previous articleप्रजातन्त्रको खोल ओड्नेले देश र जनतालाई किन निर्चोदै छन ?